Benedict Cumberbatch ကတည်ခင်း Saturday ည့်ခံသောစနေနေ့ညတိုက်ရိုက်မှာ Hulu တွင်ဖြစ်သည် - Netflix သတင်း
စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်ရာသီ ၄၂၊ Benedict Cumberbatch မှစီစဉ်သောအပိုင်း ၅ သည် Hulu တွင်ဖြစ်သည်
New York, NY - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ - Gotham တွင် Keenan Thompson၊ Kate McKinnon, Dawn Dubois, Aidy Bryant နှင့် Jay Pharoah တို့တက်ရောက်ကြသည်။
Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 13, အပိုင်း7Hulu အပေါ်ယခုဖြစ်ပါတယ် The Crown Season2သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။
စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်ရာသီ ၄၂၊ Benedict Cumberbatch မှစီစဉ်သောအပိုင်း ၅ သည်အံ့’s ဖွယ်ရာအသစ်ရုပ်ရှင် Doctor Strange တွင်သရုပ်ဆောင်သော Hulu အပေါ်ယခုဖြစ်သည်!
မင်းသတိရတယ် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် ဒီတနင်္ဂနွေလား မကြောက်ကြနှင့်။ သငျသညျယခု၏နောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ရှုနိုင်သည် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် အခု Hulu အပေါ်!
စီးရီး ၄၂ ရာသီ၏ပဉ္စမအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်အပျက်ကိုမကြာသေးမီကသူ၏အံ့ဖွယ်ရုပ်ရှင်အသစ် Marvel's အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည့် Benedict Cumberbatch ကစီစဉ်ခဲ့သည်။ Doctor Strange ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Cumberbatch သည် Doctor Strange အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။ ယခုရုပ်ရှင်သည်နို ၀ င်ဘာ ၄ ရက်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ပြသနေသည်။
Solange သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ဂီတ guest ည့်သည်ဖြစ်သည် SNL!
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်များအတွက်အအေးပွင့်လင်း shared SNL အောက်မှာ! ဘာလို့ထင်လဲ? ၎င်းတွင်သင်၏အနှစ်သက်ဆုံးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲစိတ်စွဲမှတ်သူနှစ် ဦး ဖြစ်သည့် Kate McKinnon နှင့် Alec Baldwin ပါရှိသည်။
သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသည်မြင့်မားသောမှတ်ချက်ဖြင့်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်သော်လည်းကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသည် #SNL ၎င်း၏ရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံတစ်ခုမှာအပေါ်နိဂုံးချုပ်: https://t.co/uOTVkPOGax pic.twitter.com/d79Qvu7l02
- hulu (@hulu) နိုဝင်ဘာ 6, 2016
သင်၏ဇာတ်လမ်းတွဲလွဲချော်လျှင် SNL, အောက်ကဗီဒီယိုကိုသာကြည့်ပြီးကြည့်ရှုပါ။
စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် NBC ရုပ်သံမှထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း Hulu တွင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
Dave Chappelle ၏ဇာတ်လမ်းအသစ်ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည် SNL နိုဝင်ဘာ 12 ရက်နေ့မှာ! ထိုအဂီတ guest ည့်သည် Quest ခေါ် Quest! သငျသညျလစျြလြူရှုလျှင် Hulu အပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ဖို့သေချာအောင်!
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲသင်ဟာ Hulu မှာပြသခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ Hulu မှာပါတဲ့စီးရီးတွေကိုကြည့်ဖို့ Hulu မှာစာရင်းသွင်းသူဖြစ်ရမယ်။ သို့သော် Hulu.com တွင်အခမဲ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပိုများသော netflix:Hulu မှအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀
စီးရီးကိုလည်း Hulu ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်လည်းပါဝင်သည်။ streaming များ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပွဲများကိုရှာဖွေရန် Hulu တွင်အကောင်းဆုံးပြပွဲများ၏ကျန်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးပါ။
ဟယ်လိုဝိန်း ၂၀ အတွက် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးထိတ်လန့်ဖွယ်ရာဟာသ ၅ ခု
Bates Motel ၏နောက်ဆုံးရာသီကို Hulu တွင်ရနိုင်ပါသလား။
ပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေမှအကောင်းဆုံးAprilပြီလ Ludgate လိုင်းများ
Marianne ရာသီ ၂: Netflix ကထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်းများကိုအသစ်ပြန်လုပ်ပေးမည်လား။
Selena ဆိုတာဘာလဲအတွဲ ၂ အပိုင်း ၂ ။
ပုံမှန်ရာသီ ၃ သည်စတင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်
Dexter of the cast: သူတို့အခုဘယ်မှာလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာသူငယ်ချင်းများပြန်လည်ဆုံဆည်းခြင်း HBO Max အပေါ်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်နည်း
Stranger Things 4: Suzie ဟာ Hopper ကိုရုရှားမှာမထားခဲ့ပါဘူး
8 ကောင်းသော Netflix သည်သင် Office ကိုနှစ်သက်သည်ဆိုသည်ကိုပြသသည်
အကောင်းဆုံးပါတီရုပ်ရှင် ၆ ကား
netflix ကအံ့ lady စရာ ladybug ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်နေ့
ဇွန်လ 2016 Netflix ထွက်ခွာယျ
စိတ်ကူးယဉ်ရာသီ2အပိုင်း 4
netflix ဒီဇင်ဘာလ 2017 အပေါ်အကောင်းဆုံးအရာ
တောင်ပိုင်းဘုရင်မ usa ချပစ်
rudolph အနီရောင်နှာခေါင်း reindeer ငှား
Disney Plus သည် Phineas နှင့် Ferb the Movie: Candace the Universe တို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မျှဝေသည်
ယောက်ျားလေးများအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်သည်အချစ်ဆုံးကြယ် ၁၃ ပွင့်အကြောင်းမပြမီကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရသူဖြစ်သည်
An E With With E သည် Netflix ကိုလွှင့်ထုတ်နေသည်
Jingle အားလုံးသည် Netflix ရှိသလား။
Charmed renewed: CW သည်အစောပိုင်းရာသီ ၄ သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုစီးရီးကိုပေးသည်